दिल्लीका राजदूतः परिणाम शून्य – सुविधा मन्त्री सरह ! « Media for all across the globe
दिल्लीका राजदूतः परिणाम शून्य – सुविधा मन्त्री सरह !
नेपाल – भारत सीमा विवाद जारी छ। नेपाल सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ता गर्न चाहान्छ। खासगरी भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने र ती ठाउँमा नेपाली झण्डा फहराउने प्रयास जारी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय दुतावासमार्फत वार्ताका लागि पटक–पटक कुटनीतिक नोट पठायो। तर, भारतीय पक्षले पटक्कै सुनेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय पात्र बाँस्कोटा लैनचौर सुटुक्क छिरेपनि काठमाडौंको आग्रह दिल्लीले सुनेको छैन। दुरीको हिसाबले काठमाडौं – दिल्ली टाढा नै छ। तर, नेपाल सरकारको दिल्लीमा दूतावास नामको संरचना नभएको भने पक्कै होइन। छन त छ, तर कता छ – बिचरा दूतावासका कालाकोटेहरु के गर्दै होलान् – सबैको चासो? भारतीय पक्षसँग भेटघाटका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको वार्ता सन्देश बोकेर कता–कता पुग्दै होलान्। स्रोत भन्छ – भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव समेत भेट्न माग्दैनन्। यता राजदूत भने मन्त्री नै भेटेको हल्लीखल्ली गर्न भ्याउँछन्। भेटे त राम्रै हुन्थ्यो। तर, कसले टेर्ने। कुटनीतिज्ञको अर्थ परिणाम शून्य त होइन, होला नि?
कहिलेकाँही प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाग्दो होः कस्तो पात्र रोजे छ – दिल्लीले। हाम्रो मान्छे, हाम्रै काम गदैनन्। ओलीको अपेक्षा राजदूत आचार्यबाट निक्कै थियो। हुनपनि किन नहोस् – मन्त्री सरहको सेवासुविधा खाने राजदूत पो हुन् – आचार्य। तर, उनको कुटनैतिक क्षमता पो देखिएन र? तलब, सुविधा त थपिहाल्छ नि? सरकार असफलताको यात्राका मुख्य पात्र मध्ये एक पात्र दिल्ली दूतावासका आचार्य पनि हुन्। उनी दिल्ली आएदेखि नै कुनैपनि संकटमा राम्रो काम गर्न सकेनन्। जस्तै – कोरोनाले नेपाली मजदूरहरु भारतका बिभिन्न शहरहरु रोइकराई गरिरहेका थिए। तर, आचार्यको कार्यालय निन्द्रामा थियो। मानौ प्रवासी मजदुरहरुका लागि यो दूतावासको होइन अर्कै दूतावास छ, कतै।
आरोप वा पूर्वाग्रह तपाईका लागि जरुर छ। किनकी, तपाई भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली र नेपाल–भारत कुटनीतिक सम्बन्ध बलियो वा सुमधुर बनाउँनका लागि उपयोगी होइन? यदपि, यी विषयमा आफुलाई अझैपनि योग्य र क्षमतावान पात्र ठान्नुहुन्छ भने – नमस्कार…!
कोरोना कहरमा राजदूत आचार्यको कार्यले लाखौं जनताले दुःख पाए। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना त्रासले सीमा नै नाध्यो। यो सबै दोषका लागि एक मात्र उपयुक्त पात्र – दिल्ली दूतावास भन्दा पटक्कै फरक पदैन। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमिबाट भारतीय अतिक्रमण हटाउने निर्णायक वार्ताका लागि आचार्यले गरेको प्रयास महिनौं भयो। तर, सफलता शून्य। लैनचौरमा बस्ने तपाईकै हैसियत भएकाहरुले नेपालमा प्रधानमन्त्री नै फेर्ने हिम्मत राख्छन्। तपाई भने वार्तामा बस्ने वातावरण नै बनाउँन सक्नुहुन्न। तपाईको क्षमता यति मात्रै देखेपछि पनि तपाईको नाम मानिसको दिमागमा जीवन्त रहनेछ।
राजदूतको जय होस्। बाँकी क्रमंश…